Pasi Zuva Dambudziko uye Yemunyika Dhanha Zuva Dambudziko | Ndinobva mac
Apple ichatanga matambudziko maviri matsva muna Kubvumbi kune vashandisi veApple Watch vanoda kuapedza. Aya matambudziko anozvimirira kumatambudziko emwedzi nemwedzi anoburitswa anotendera tora menduru dzakasarudzika, zvitambi zvekutumira mumameseji uyezve hosi yakanaka yehutano.
Mune ino kesi, iyo Cupertino kambani ichavhura maviri matsva matambudziko kune vashandisi veApple Watch, imwe yatinayo gore rega uye inoenderana zvakananga ne Zuva rePasi uye idzva rinosvika kekutanga uye rakanangana zvakananga neInternational Dance Day.
Matambudziko ese ari maviri achange achiwanikwa munguva pfupi (haatarike izvozvi) yemwedzi uno waKubvumbi asi nemisi dzakasiyana nezvinangwa. Panyaya yedambudziko reZuva rePasi, Apple yanga ichidzokorora gore rimwe nerimwe kwemakore mashoma uye vachazvimisikidza musi waApril 22. Iri dambudziko rine ita chero mhando yekudzidzira neyese application inowirirana newadhi kwemaminitsi makumi matatu kana kudarika.
Kune rimwe dambudziko riripo, zvichave zvakakodzera kutamba zvishoma uye izvi Ichaitika muna Kubvumbi 29. Mune iri dambudziko nyowani rine chekuita neInternational Dance Day, vashandisi vanofanirwa kutamba kwemaminetsi makumi maviri kana kupfuura nekurekodha rovedzo kubva kuapp yekutarisa. Mune ino kesi isu tinofanirwa kumisa iko kudzidziswa kubva pawachi pachayo uye… Ngatitambe!
Chinhu chakanakisa nezvematambudziko aya ndechekuti vashandisi vanokurudzirwa kuti vafambe uye zviri pachena kuti kiyi kwavari. Izvo hazvisi zvekuhwina menduru dzeiyo wachi (izvo zvakare) ndezvekukunda muhutano hwedu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Pasi Zuva Dambudziko uye Yemunyika Yekutamba Zuva Dambudziko